Iimvumi zeVerizon eziSimahla - Iselfowuni Iifowuni
Iimvumi zeVerizon eziSimahla
Uneselfowuni enye yezona zinto zidumileyo ekuphatheni iiselfowuni kwaye ufuna ukuyicofa ifowuni yakho yeVerizon ngethoni yokukhala ebambekayo. Kukho ezinye iisayithi ezintle phaya ezinikezela uluhlu olubanzi lwee-ringtone ezikhululekileyo ukuze zilungele isitayile sakho okanye incasa yomculo.
Enye yezona ndawo zikhulu kakhulu nezaziwa kakhulu kwiithoni zeringithoni kwi-Intanethi, uZedge unentabalala yeethoni zokubonelela kubasebenzisi. Ukusuka kuhlobo lomculo njengepop, ilitye, ihip hop, umdaniso, kunye nelizwe ukuya kwizandi nakwizwi, uZedge unakho konke.
Iithowuni zokukhala simahla zeRingback
Khuphela iithowuni zokukhala nokuba usebenzisa ikhompyuter yakho ukuze uyigqithisele kwisixhobo esiphathwayo kamva okanye uzithumele ngqo kwifowuni yakho ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni. Insiza iyahambelana nge Android kwaye Izixhobo zeApple . UZedge akaboneleli ngeesandi zasimahla kuphela, bakwabonelela ngesimahla iphepha lodonga le-HD kunye nemixholo yesixhobo sakho esiphathwayo.
I-ToneTweet yiwebhusayithi elula, eqondekileyo ethe ngqo kwiwebhusayithi ebonisa ezinye zeemvumi ezithandwa kakhulu kunye nezona zintsha kakhulu kwiphepha langaphambili. Banikela malunga nalo lonke uhlobo lomculo apho kuya kubakho iimfuno zakho zethoni yokukhala ngokufanelekileyo.
Awunyanzelekanga ukuba wenze iakhawunti yokukhuphela nayiphi na iringithoni kwindawo leyo. NjengoZedge, unokuzikhuphelela kwifayile yeringithoni kwikhompyuter yakho kwaye uyigqithisele kwifowuni yakho okanye unokuzikhuphela ngqo kwifowuni yakho ukuba unesoftware yomphathi wefayile Umphathi Wefayile ye-Astro .
Ngokungafaniyo nezinye iisayithi ezikhankanyiweyo ukuza kuthi ga ngoku, i-mobile9 ibonelela ngeendlela ezininzi zomculo zangaphandle kubasebenzisi abanokuba nomdla kwithoni yokukhala kulwimi lwabo lweenkobe. Ikhathalogu ibandakanya iilwimi ezinje ngesiArabhu, isiBengali, isiTshayina, isiHindi kunye nesiJapan.
mobile9 ineapp ye Izixhobo ze-Android , Izixhobo ze-iOS kwaye Izixhobo zeWindows Abasebenzisi banokusebenzisa ukukhuphela iithowuni ngqo kwiifowuni eziphathwayo. Iithowuni zokukhala ezinikezelwayo zihluzwa ngokudibana kwesixhobo, okuthetha ukuba ibonisa kuphela kwaye inikezela ukuncenceza okuhambelana nefowuni yakho. Kwakhona, i-mobile9 ibonelela ngeemifanekiso zamaphephadonga asimahla e-HD, kunye neevidiyo ezivela kumaqonga ahlukeneyo kunye nemithombo, yabasebenzisi yokukhuphela ngokukhululekileyo nabo.
I-MyTinyPhone ibonelela ngethala leencwadi elikhulu lee ringtone, uninzi lwazo oluhlekisayo kwindalo ngamazwi, isandi kunye neengoma zokudlala. Iimvumi zahlulwe kakuhle, kwaye kukho icandelo elibonisa ezona zixhobo zidumileyo okanye ezithandwayo.
Indawo ikwavumela abasebenzisi ukuba benze ezabo iithowuni zokukhala ngeefayile zeMP3. Eli nqaku alifuni ukuba wenze iakhawunti yasimahla. Kulabo bafuna ngaphezulu, i-MyTinyPhone ikwabonelela ngeemifanekiso zodonga lwe-HD, imixholo, iiapps, kunye nemidlalo yeselfowuni.
Ngeethowuni zomculo ezithandwayo, ezihamba phambili kunye nokutsalwa kwetshathi, iCellsea iya kuwuzalisa ngokufanelekileyo umnqweno wakho wokukhala kweethoni ezintsha. Icandelo elithi 'Iimvumi ezithandwayo ngoku' kwiphepha elingaphambili liya kunceda ukunciphisa ukukhangela, ukunciphisa isidingo sokukroba iringithoni efanelekileyo.
I-Cellsea ikuvumela ukuba ukhethe imodeli yefowuni yakho ukucoca iithowuni ezihambelana nefowuni yakho. Ukuba unayo ifowuni ye-Android, unokukhuphela usetyenziso lweCellsea ukwenza eyakho imisindo yesandi sakho nayo.
amagama amnyama omntwana oyinkwenkwe kunye neentsingiselo
Ukucoca iithowuni ngokususelwa kukhululo kunye nokuthandwa, mob.org unethemba lokwenza ukukhangela iithowuni zomsebenzi umsebenzi onzima kwaye unengxaki. Umzekelo, kulula ukuhlela uluhlu ngokusekwe kwindlela entsha ngayo iringithoni, indlela edume ngayo iyonke, nendlela edume ngayo kule nyanga. Unokusebenzisa ezi ndlela zokucoca emva kokukhetha udidi oluthile.
Inani lokukhutshelwa kwethoni yokukhala ethile eliyifumeneyo liyaboniswa emva kweringithoni nganye. Iimpawu zekrisimesi, imixholo, imidlalo, kunye neeapps ziyafumaneka okanye abasebenzisi abanokuzikhuphela ukuthanda kwabo nabo.
Ithoni yokukhala ifana nezinto onxibayo ukukunceda ukubonisa indlela oziva ngayo ngesimbo. Zininzi iintlobo zeethoni zokulinga ukuze zilungele ubuntu bakho, kodwa kukho ezinye ezinokuthi zingalungeli iimeko ezithile. Ukuba nomculo ocacileyo odlalwa ngokuvakalayo kwindawo yezobugcisa kunokutsala ingqalelo engafunekiyo nengathandekiyo. Ke, yazi ukuba zeziphi iithowuni ozikhethayo kunye nendawo ekungqongileyo.
Iindidi E Wayini Ekhaya School Slideshows Online Games Ngaphezulu Size Clothing Stores Iindidi Zesixokelelwano Irings
intsingiselo yolu phawu xa uthumela imiyalezo
Amagama amantombazana aqala ngonobumba u-s
idayi yeenwele ezilungileyo zokugubungela ngwevu
iintsilelo zemali mboleko fha kubathengisi
ubunzima obuphakathi bendoda eneminyaka eli-14 ubudala